निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार
एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्क्र व्यत्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व र सहकार्य (३ स) को सिद्धान्तमा अडिग हुनु जरुरी छ । यहाँ राज्यले मूलतः सरकारद्वारा व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको अस्तित्व उत्तिकै स्वीकार्ने र उनीहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने गर्छ । यस्तो ‘हितकारी’ राज्य नागरिक र समाज दुवैको बलमा ‘लेफ्ट–राइट, लेफ्ट–राइट’ गर्दै अघि लम्कन्छ ।
हितकारी राज्यमा व्यक्तिको आचरण र जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ ? समाज कसरी हिँड्छ ? सरकारले कसरी काम गर्छ ? यी अहम् प्रश्न हुन् । एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष हितकारी राज्यमा न्यूनतम माक्रामा व्यत्ति वा नागरिकले सही के र गलत के भनी छुट्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो नागरिकलाई विवेकशील भन्न सकिन्छ । उसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । सरकारलाई सेवक बनाउन सकिएन भने ऊ सदैव शासक बन्नतिर लाग्छ ।
लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन् ।